Madax ka tirsan Dowladda oo soo farageliyay khilaaf ka taagan maamulka gobolka Sh/hoose
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa booqday magaalada Marka iyo degaano kale oo ka tirsan gobolka Sh/hoose, waxaaana wafdigaasi sidoo kale la socday Taliyaha guud ee ciidamada AMISOM ee iyagu ku sugan gobolada Shabeelooyinka.
Maamulka gobolka Sh/hoose madax ka tirsan, waxgarad iyo odayaal ku dhaqan magaalada Marka ayaa kulan la yeeshay wafdiga Wasiirka Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise iyo saraakiisha kale ee la socotay, iyagoo ka wadahadlay arrimo ku saabsan gobolka iyo khilaafaadyo ka taagan is qabqabi maamul oo gobolka ka jira.
Warar ku dhow dhow wafdiga Dowladda ee iyagu halkaasi gaaray ayaa odayaasha iyo bulshada ku dhaqan magaalada Marka waxay ku booriyeen inay ka qeyb qaataan amniga magaalada iyo in haraadigii kooxda Al-Shabaab ay u soo gacan geliyaan ciidamada Dowladda ayna la shaqeeyaan.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxda dowladda ay ballanqaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku dhameynayaan khilaafaadyada dhinaca maamulka ah iyo is qabqabsiga ay ku soo afjarayaan.
Dhinaca kale Wasiirka gaashaandhigga DFKMG ah oo uu la socday Taliyaha ciidamada Dowladda Soomaaliya booqasho ku tageen fariisimaha ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Sh/hoose, gaar ahaan Km50, Km60, Magaalada Marka iyo Shalaambood.
Wasiirka Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise oo kulan gaar ah la yeeshay odayaasha magaalada Marka ayaa waxay ka wadahadleen sidii loo sameyn lahaa maamul ay u dhan yihiin dadka degan magaalada Marka, iyagoona Wasiirka ka codsaday inuu gacan ka geysto sidii arrimahaasi loo meel marin lahaa.